प्लेनमा जन्मिएका बच्चाहरू कुन देशका नागरिक हुन्छन् ? - Alert Khabar
Homeमनोरञ्जनप्लेनमा जन्मिएका बच्चाहरू कुन देशका नागरिक हुन्छन् ?
काठमाडाैँ । हामी धेरैले प्लेनमा नै बच्चाको जन्म भएको सुनेका छैनाैँ होला, तर कतिपय भने यस्ता घटनाको प्रत्यक्षदर्शी समेत भएका पनि हुन सक्छाैँ ।
विश्वका धेरै देशहरूमा प्लेनमा यात्रा गर्ने विभिन्न नियम बनाएका छन् । उदाहरणका लागि भारतमा ७ महिनाभन्दा धेरै समयकी गर्भवति महिलाले प्लेनमा यात्रा गर्न नपाउने नियम छ । यद्यपी महत्वपूर्ण अवस्थाका लागि यो नियम लचिलो छ ।
यस्तो नियम भएता पनि बच्चाहरूका अभिभावकमा बच्चालाई कुन देशको नागरिक बनाउने भन्ने अधिकार पनि हुन्छ ।
उदनहरणका लागि यदी पाकिस्तानबाट अमेरिकातर्फ जाँदै गरेको प्लेन भारतको आकाशमा हुँदा बच्चा जन्मिएमा उक्त बच्चाले भारतको नागरिकता पाउँछ । त्यसैगरी उक्त बच्चाका अभिभावक जुन देशका नागरिक छन् सोही देशको नागरिकता पाउँछ । तर, भारतमा २ देशको नागरिकता लिन मिल्ने प्रावधान भने छैन ।
केही वर्षअघि अमेरिकामा यस्तै घटना अमेरिकामा देखा परेको थियो । नेदरल्याण्डबाट अमेरिका जाँदै गरेको प्लेनमा एट्लान्टिक ओसनमा पुग्दा महिलाले स्वस्थ बालिकालाई जन्म दिइन् ।
अमेरिकाको सिमानामा जन्मिएको हुनाले ती बालिकाले अमेरिकी नागरिकता प्राप्त गरिन् । त्यस्तै उनको नाममा नेदरल्याण्डको नागरिकता पनि बन्यो ।
यद्यपी हरेक देशले प्लेनमा जन्मिएका बच्चाहरूलाई दिइने नागरिकताका लागि छुट्टाछुट्टै नियम बनाएका छन् ।